Ma Awaddy Shein
Ma Htet Htet Phyo
Garnier Super Essence တွေကို super center တွေ cosmetics stand တေ မှာ အုန်းအုန်းထ ၇ှာမ​နေကြတော့နဲ့နော်။ မမတို့လို focus beauty agent တွေဆီမှာ ပဲရတော့မှာ။ အိနြေ္ဒရရ ဖုန်းဆက် မှာလတ်တော့နော်။ အော် မမစု ဖုန်းက 09420771491 နော်။ Garnier Super Essence လေးက တဘူး 12000 မတ်မတ်ဆီမှာ လက်လီ လက်ကားရတယ်နော်။
Snail ကို ယောကျားလေးတွေ လိမ်းရင် ဘယ်လို ဖြစ်မယ်။ အသက်ကြီးလို့ အလွန်အမင်း ပါးရေတွန့်ရင် ပြန်ကောင်းမကောင်း သိချင်လို့ အခုရက် စမ်းဖြစ်တယ်။ Result က ဖြူဖွေးစွတ်ကြီးတော့ မဖြစ်ဘူး။ Handsome ဖြစ်ရုံပဲ။ ဇေရဲထက် မဖြစ်ဘူး နေတိုးလောက်ပဲ။ တပတ် ကြာ၇င် အရေးကြောင်းလက် တနှိုက် ပျောက်သွားမယ်။ ကျမယောကျား snail စသုံးတဲ့ ၀၄၊ ၀၃၊ ၂၀ က snail လိမ်းပြီး ၇ိုက်ထားပုံ နဲ့ တပတ်အကြာ အရေးကြောင်း အနီးကပ် ပုံကို ယှည်ပြထားပါတယ်။ မှာယူလိုပါက ☎09420771491 or Cb
Ma Chit Hnin Phyu
Nant Mya Khwar Nyo
Supermarket တှစေတိုးဆိုငျတှမှောရှာဝယျမရတော့လို့အုနျးအုနျးထနတေဲ့Garnier Essenceတှမေတျမတျဆီမှာလို့ရတယျနျော😉😊
Ma Aye Aye Lwin
FA(Forever alone )က​နေ. FB (Forever beauty) ဖွဈဖို့. Focus beauty က ထုတိတဲ့ product​လေး​တှသေုံးကွညျ့ကွ ပါ😍😍😍 5g. new skin cream. 3500ks 50 g. Snail wish cream. 29500 ks New skin mask. 1ခပျြ. 3000ks 1ဘူး. 15000ks
First Page « 116 117 118 » Last Page